"I-Dure" njani (ekugqibeleni) iConfused in French?
Esi sifundo kwiNgqungquthela yesiLwimi saseFransi ayiyi ku "gqibela" ixesha elide
Ngokufanayo neliNgesi igama elithi "nya mezela," isenzi sesiFrentshi i-insurer sithetha "ukuhlala." Igama elilula ukulikhumbula kwaye ungeze kwigama lakho lesiFrentshi. Ukuzixubusha kwixesha elidlulileyo, elikhoyo, okanye elizayo libuye lilula.
Ukudibanisa isenzi sesiFrentshi
Iilwimi zokubambisana ziyimfuneko ukuze zichaze "zithe" okanye "zihlala." NgesiNgesi, sisebenzisa ezi zinto-kunye neziphelo, nangona izinto zinzima ngakumbi kwisiFrentshi.
Kungenxa yokuba kukho ukuphela kwesigama ngasinye kwisigama sesigama kunye nayo yonke imihla.
I-Dure iqhelekileyo -Izenzi ze-IT kwaye ilandela iphethini yesenzo esivamekileyo yokuzibandakanya ngolwimi lwesiFrentshi. Oku kwenza ukuba izenzi ezintsha zokufunda zilula kangangoko kuba unokusebenzisa ezi ziphelo ezifanayo kumxabano (ukuphikisana) , umxhasi (ukuchitha) kunye nezinye izenzi.
Ukuze ufunde isingeniso sesenzi, jongana nesigidimi sesifundo kunye nexesha elifanelekileyo kwisigwebo sakho. Ngokomzekelo, "ndokugqibela" kuba " ndilindela " kwaye "siya kuhlala" ngu " sisi dureons ."
kuzinza u kugcina durais
zifuna dureras durais
kuzinza durera durait
mizuzu iireli iidrions
lihlala ixesha u kugcina du du
I-Partciple ye- Durer
Xa ungeze - isantsi kwisenzi isima , i- participant durant iyakhiwa. Oku kuncedo njengoko kungenzi nje nje njengesenzi, kodwa nayo isebenza njengesigqibo, isi-gerund, okanye isibizo xa kufuneka.
I- passé compé yindlela eqhelekileyo yexesha elidlulileyo "elidlulileyo" ngesiFrentshi. Yakhiwe ngokudibanisa isenzi esincedisayo ukuba simelane nesigama sesigxina, kwaye udibanise i- participé eyedlule .
Ngokomzekelo, "ndahlala" kuba " i durée " kwaye "sasihlala" ngu " sisi durée ."
Ukugqithisa okulula ngakumbi
Esi sifundo siquka ukulungelelanisa kwezenzi zengqesho zokuhlala . Ekuqaleni, funda iikhompyutheni zangoku, izayo, kunye nexesha elidlulileyo ngasentla kwaye usebenzise ukusetyenziswa kwazo kwimeko. Emva kokuba unabo abayekhunjulwe, qwalasela ukongeza ezi fom zilandelayo kwisigama sakho.
Iimpawu ezizimeleyo kunye nezimeko nganye zibonisa uhlobo oluthile lokungaqiniseki okanye ukuxhomekeka kwenzo. Ezi zincedo kakhulu, ngokukodwa ngesenzi njengendleko yokuba i-" permanent " ingasayi kuqinisekiswa ngaso sonke isikhathi.
Ngokwahlukileyo, kunokwenzeka ukuba uza kuhlangana kuphela nokuhamba ngokulula nokungafezeki ngokubhala phantsi. Nangona ungeke uzisebenzise ngokwakho, ufanele ukwazi ukuwaqonda njengendlela yokuhlala i- dure xa ufunda.
kuzinza durerais durai ukucima
zifuna durerais duras ukuhlala
kuzinza durera ukuhlala durât
iidrions durerions durâmes durassions
lihlala ixesha zihlala zihlala ixesha elide ehlala njalo
Imvakalelo yesenzo esicwangcisiweyo isetyenziswa ngokusisigxina kunye namaxesha amaninzi anengxelo. Xa usebenzisa oko ukucela ngokukhawuleza okanye ukufuna into ethile, isigama sesigqirha asifunwa: yithi " yomelele " kunokuba " uhlale unzima ."
Ukusebenzisa 'iPerar De'